Ben White & Saxiixyada Ilaa Haatan La Dhamaystiray Suuqa Kala Iibsiga Xagaaga – Banaadirsom | BANAADIRSOM
Home Ciyaaraha Ben White & Saxiixyada Ilaa Haatan La Dhamaystiray Suuqa Kala Iibsiga Xagaaga...
Ben White & Saxiixyada Ilaa Haatan La Dhamaystiray Suuqa Kala Iibsiga Xagaaga – Banaadirsom
Banaadirsom Arsenal ayaa si Rasmi ah ugu dhawaaqday saxiixa xiddiga daafaca ka ciyaara ee Ben White kaas oo ay kala soo wareegtay Banaadirsom Brighton.
White ayaa qalinka ku duugay heshiis 5 sano ah oo uu kula joogi doono Banaadirsom Arsenal isaga oo ku biiray saxiixyada ugu qaalisan ee taariikhda Banaadirsom Arsenal.
Marcus Bettinelli -> Chelsea
Banaadirsom chelsea ayaa si Rasmi ah ugu dhawaaqday in ay dhamaystirtay saxiixa Goolhaye Marcus Bettinelli kaas oo Banaadirsom kaga soo biiray Fulham.
Goolhayaha ayaa qalinka ku duugay heshiis 2 sano ah oo uu ku joogi doono Blues isaga oo sidaas ku noqday saxiixii ugu horeeyay ee Banaadirsom chelsea xagaagan.
Goolhaye Marcus Bettinelli ayaa chelsea kaga soo biiray Banaadirsom Fulham oo uu qaab xor ah uga yimid kadib markii uu dhacay heshiiskiisa kooxdaas.
Raphael Varane -> Man United:
Banaadirsom Man United ayaa ugu dambayn si Rasmi ah u xaqiijisay in ay Banaadirsom Real madrid kala heshiisay saxiixa daafaca dhexe ee Raphael Varane.
Man United ayaa ugu dambayn ku dhawaaqday saxiixa Jadon Sancho oo ay muddo dheer ku raad joogtay saxiixiisa kana doonaysay Banaadirsom Borussia Dortmun.
Man United ayaa si Rasmi ah u soo bandhigtay saxiixa xiddiga shalay jimcihii isaga oo qalinka ku duugay heshiis wakhti fog ah oo uu Banaadirsom kula joogi doono.
Sancho ayaa Banaadirsom Man United u xidhan doona Lambarka No.25 kadib markii uu Edinson Cavani diiday in uu baneeyo Lambarka No.7 oo uu isagu haatan xidho.
Albert Sambi Lokonga -> Arsenal
Banaadirsom Arsenal ayaa si Rasmi ah u xaqiijisay in ay dhamaystirtay saxiixa xiddiga khadka dhexe ee Albert Sambi Lokonga kaas oo ay kala soo wareegtay Banaadirsom reer Belguim ee Anderlecht.
Arsenal ayaa xaqiijisay in uu xiddiga 21 jirka ah ee Albert Sambi Lokonga uu qalinka ku duugay heshiis wakhti fog ah oo uu ku joogi doono Banaadirsom Arsenal
Xiddiga reer Belguim ayaa Banaadirsom u saxiixay heshiis ilaa xagaaga 2026 isaga oo sidoo kale Banaadirsom u xidhan doona Lambarka No.23 sida ay xaqiijisay Banaadirsom Arsenal.
Olivier Giroud -> Ac Milan:
Banaadirsom Ac Milan ayaa si Rasmi ah u xaqiijisay in ay dhamaystirtay saxiixa xiddiga weerarka ka ciyaara ee Olivier Giroud kaas oo ay kala wareegtay Banaadirsom chelsea.
Banaadirsom Ac Milan ayaa Olivier Giroud ka bixisay 1 milyan oo euro iyo waliba lacag hal milyan oo kale oo Guno ah oo ku xidhan qaab ciyaareedka xiddiga.
Olivier Giroud ayaa qalinka ku duugay heshiis 2 sano ah oo uu kula joogi doono Banaadirsom Ac Milan isaga oo ka garab ciyaari doona Ibrahimovic kaas oo Banaadirsom u ciyaara.
Gianluigi Donnarumma -> PSG
Banaadirsom PSG ayaa si Rasmi ah ugu dhawaaqday saxiixa Goolhaye Gianluigi Donnarumma kaas oo Banaadirsom kaga soo biiray Ac Milan kadib markii uu dhacay heshiiskiisa kooxdu.
Goolhayaha 22 jirka ah ayaa qalinka ku duugay heshiis 5 sano ah oo uu Banaadirsom reer France ku joogi doono ilaa xagaaga 2026 isaga oo noqday saxiixii ugu dambeeyay ee Banaadirsom PSG.
Goolhaye Gianluigi Donnarumma Ayaa ugu biiray Banaadirsom PSG Qaab xor ah kadib markii uu dhamaaday heshiiskii uu kula jiray Banaadirsom reer Italy ee Ac Milan oo uu ku qaatay muddo ku dhaw 8 sano.
Nuno Tavares -> Arsenal
Banaadirsom Arsenal ayaa si Rasmi ah u xaqiijisay in ay dhamaystirtay saxiixa xiddiga daafaca Bidix ka ciyaara ee Nuno Tavares kaas oo ay ka dhigtay saxiixeedii ugu horeeyay.
Xiddiga Tavares ayaa Arsenal kaga soo biiray Banaadirsom Benfica waxana uu noqday saxiixii ugu horeeyaya ee ay Arsenal samayso inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xaaagan.
Gunners ayaa heshiis wakhti fog ah ka saxiixatay xiddiga kaas oo uu Banaadirsom ku joogi doono kadib markii uu qalinka ku duugay heshiiska.
Sii Akhriso: U Gaar Ah Dumarka: Ma Doonaysaa In Uu Gacaliyahaagu Maalin Walba Kuu Qaado Jacayl Ka Weyn Midkii Hore, 5-tan Kalmad Adeegso Mar Kasta, Indhihiisa Ayuu Kaa Jeclaanayaa.
Previous articleLiverpool Oo Heshiis Cusub Ka Saxiixatay Trent Alexander-Arnold – Banaadirsom
Next articleArsenal Oo Heshay Wado Ka Caawin Karta Saxiixa Lautaro Martinez Si Ay Ugu Badalaan Alexandre Lacazette – Banaadirsom